BA (Hons) Business Management (Top-Up)	Featured
“Level-4 Diploma in Business Management” (RQF)
IGCSE အာင်မြင်ထားသူများ, တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်များနှင့် အဝေးသင်တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား/သူ များအတွက် Scholarship & Installment program ...
BA(Hons) Business Management (top-up) Programme ပထမနှစ် ဒီပလိုမာသင်တန်း... UK qualification:
OTHM (UK) သည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ Federation of Awarding Bodies (FAB) ၏အဖွဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်ပြီး OTHM ၏သင်ရိုးနှင့် လက်မှတ်များသည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံအစိုးရ၏အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုတွင် အကြီးဆုံးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation) နှင့် Credit an Qualifications Framework for Wales (CQFW) တို့မှ တိုက်ရိုက်အသိအမှတ်ပြုမှု ရရှိထားသောအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
သင်ကြားရမည့် ဘာသာရပ်များ မှာ Foundation (၃) ဘာသာ နှင့် အဓိကဘာသာ (၆) ဘာသာသင်ကြားရပါမည်။
Foundation (၃) ဘာသာ…..
EVER UP COLLEGE တွင်အားဖြည့်သင်ကြားပေးမည့် Foundation (Pre University Programme) သည် မိဘများ၏ကျောင်းသား/သူများအတွက် Business Management (Accounting, Finance & Business) နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြေခံကောင်းရရှိရန် နှင့် First Year မှ UK Bachelor Degree ဘွဲ့ရသည်အထိ မိမိသင်တန်းများအတွက် လိုအပ်သော Assignment, Coursework, နှင့် Practical Project Report များကို ရေးသားနိုင်ရန် သင်ကြားပေးခြင်း၊ ပညာသင်ကာလတလျှောက်ကိုယ်ပိုင် အစွမ်းအစဖြင့်တက္ကသိုလ်ပညာရေး တွင်အဆင့်အတန်းရှိရှိ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများနှင့်ရင်ဘောင်တန်း၍ သင်ယူနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ စနစ်တကျ ရေးဆွဲဖွဲ့စည်းထားပြီး နာရီ (၇၀) ကြာသင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပြီး EVER UP COLLEGE ၏ “Certificate in Business Management Foundation” လက်မှတ်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဓိကဘာသာ (၆) ဘာသာသည် 100% Assignment ဖြစ်သောကြောင့် စာသင်ရုံသာမကသင်ကြားပြီးနား လည်သမျှကို ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရေးသား ရသောစနစ်ဖြစ်ပါသည်။
BA (Hons)Business Management ဘွဲ့သို့တက်လှမ်းခြင်း ….
1st year & 2nd year UK Bachelor’s degree - (Level4&5Diploma in Business Management) ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးပါက OTHM (UK) နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တက္ကသိုလ်ကြီးများ၏ နောက်ဆုံးနှစ် သို့တိုက်ရိုက်တက်ရောက်ပြီး BA (Hons)Business Management ဘွဲ့ကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
UK Bachelor Degree ကို နိုင်ငံတကာ Universities ကြီးများတွင်လည်း ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်ရန် EVER UP Study Abroad Services မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
“Level-4 Diploma in Business Management”
ပုံမှန်သင်တန်းကြေး - ၃,၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၆ ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် (သို့) IGCSE 6A and above (၂၀) သိန်း
၅ ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် (သို့) IGCSE 5A (၁၅) သိန်း
၄ ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် (သို့) IGCSE 4A (၁၀) သိန်း
၃ ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် (သို့) IGCSE 3A (၈) သိန်း
၁/၂ ဘာသာ ဂုဏ်ထူးရှင် (သို့) IGCSE 1/2A / ရိုးရိုးအောင်ဂုဏ်ထူးမပါ (သို့) IGCSE ရိုးရိုးအောင် (၃) သိန်း …
စသည်တို့အား အရေအတွက်ပေါ်မူတည်၍ ပညာတော်သင်ဆုအနေဖြင့် ပေးအပ်ချီးမြင့်မှာဖြစ်သည့် အပြင် အရစ်ကျပေးသွင်းနိုင်ရန်စီစဉ်ပေးထားပါသည်။
Tuesday (10am – 1pm)
Wednesday (10am – 4pm)
Thursday (9am - 3pm)
သင်တန်းကြေး နှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုသူများ ရုံးချိန်အတွင်း EVER UP COLLEGE သို့လူကိုယ် တိုင် လာရောက်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
EVER UP COLLEGE
No:29, Hledan Street (Lower Block), Between Mahabandula and Strand Road.
Ph: 09 444 777 901 ~ 903
မှတ်ချက် ။ တနလာင်္နေ့တိုင်း ရုံးပိတ်ပါသည်။
About EVER UP College
In 2008 EVER UP Services Company limited was set up. Since 2010, we have been operatingabundle of educational qualifications and training services carried off by EVER UP Human Resources Institute. Since March 2017, it has been upgraded into College. EVER UP College is the leading college dedicated to provide quality and regulated education, and professional qualifications for people who would like to realize their potentials globally, to shape their future by smart competency and to make themselves an edge over completion for sustainability. We bring only accredited qualifications to our customers to make them highly effective and competent which are globally recognized professionals.
Latest from Ever Up